Uthini Ukunyuka Kweentambo?
Okanye ukuhamba-ukuhamba, ngegama elithi purists
Ukuhamba ngezinyawo kuthetha ukuhamba ukusuka kwelinye icala lokuhamba umgama omde ukuya kwelinye. Ukuba uqala kwi-headhead ye-trail, tyelela nayiphi na indawo oya kuyo kwaye ubuyisele iminyathelo yakho emva kweso sihloko sokuqala, awuhambanga-uphawule - wenze ngaphandle nangemva.
Ngokuqhelekileyo uza kubona imimiselo enjenge-thru-hiking kunye ne-section-hiking (ukuhamba umzila omde ngesinye isiqhelo ngexesha) esetyenziselwa ukunyuka kwexesha elide elilinganisa ngamawaka eekhilomitha ezilide, njengePacific Crest Trail kunye ne-Appalachian Trail .
Kodwa zombini imiqathango ifaka kwiindlela ezifutshane ezingaqalanga kwaye ziphelise kwinqanaba elifanayo.
Umbuzo wezinto zokusebenza ...
Abo bazinikela kwenye yezona zihlandlo ezininzi zihamba ngeendlela eziliqela ngexesha. Ngokuqhelekileyo baphinde baphinde bazibonele ngokuncedisa ukuthunyelwa kwangaphambili ukuthumela i-drop down the path. (Ngokuchanekileyo indlela abafikelela ngayo loo maphakheji avuselelayo enquma ukuba ingaba ixhaswa okanye ayixhaswanga.)
I-hardcore enokwenene inokwenza "yo-yo": ukuhamba ngeendlela zonke ukusuka komnye umgca wendlela ukuya ekupheleni, uze uhambe yonke indlela uqale apho uqale khona.
Abaxhamli bavame ukuba ngabagijimi be-backpackers - okanye ubuncinci kakhulu, benza kakuhle kwiinkqubo zabo-ngaphandle kokufuneka. Xa kufuneka uhambise yonke into oyifunayo kwimva yakho phakathi kweemeko zokuhamba ezingaphaya kweekhilomitha ezilikhulu, ufunda ukwenza nokwenza nini ngaphandle.
... kwaye kwabanye, yindlela yokuphila
Ngokuqinisekileyo ukuba ungaphambukela ngaphaya kwendlela ehambileyo ngexesha lokunyuka, ngaphandle kokulahlekelwa yindawo yakho, "umbuzo ojulile, ufilosofi" ndiya kukuvumela abo bavelele ngeemvakalelo ezinzulu malunga naloo nto.
Impendulo mhlawumbi inokuyenza nokuba kutheni uhamba kwindawo yokuqala njengento enye. Kunelungelo lokuthi ezinye iindlela ezide zenze iipaspasses zikuncede ukuba ujikeleze amacandelo anzima xa ukhetha, kwaye ngokuqinisekileyo unokuzenza ngokwakho. Kwakhona, ezinye zexesha elide liyakuthi zibandakanye ukuhamba ngasendleleni njengenxalenye yendlela (ukuba akukho khetho olufanelekileyo lukhoyo).
Imizekelo yezidumi ezidumileyo e-United States ziquka:
Umzila wePacific Crest: Le mizila engama-2,650 ihamba ukusuka eMexico ukuya eCanada esebenzisa eCalifornia, e-Oregon naseWashington. Ngenxa ye-akhawunti enomdla (kunye neyebodwa) yokuhamba ngokuhamba ngelo mzila, funda i- "Wild: Ilahlekile kwaye ifunyenwe kwi-Pacific Crest Trail," nguCheryl Strayed.
Umzila we-Appalachian: Waziwa nangokuthi yi-AT okanye nje "Umzila," le mimoya engama-2,180-mile ukusuka eGeorgia ukuya eMaine.
Umzila weLwandlekazi: I- 3,500-mile trail ihamba kwiintaba zaseRoyy ezivela eMexico ukuya eCanada. Ukuhamba-ukuhamba kule mizila emithathu yokuqala kubizwa ngokuba yi "Triple Crown."
Umzila weeMountains-to-Sea Le ndlela ehamba nge-925-mile inokwenza oko kukuthi, ukuthabathela ezintabeni ukuya elwandle, yonke into emida yeNorth Carolina.
Umzila oPhezulu weMiholide: Iindawo ezininzi zokuhlawula iintlawulo kunye neendlela eziqhelekileyo kwiimitha ezili-5 ukuya kwii-10 zenza le mizila engama-286 eMinnesota indawo enkulu yokuqalisa umsebenzi wakho wokuhamba.
UJohn Muir I-Trail: Le ndlela ye-miyela eyi-215 iqala kuYosemite kwaye iphelela kwi-14,496-foot Mount Whitney. Uninzi lwalo lugqithise i-Pacific Crest Trail.
Umzila weTahoe Rim: Le ndlela ehamba ngeekhilomitha ezingama-165 iwela i-Lake Tahoe. Ngokwenene ngumkhonto owela eCalifornia naseNevada; Iikhilomitha ezili-49 zazo zihambelana nePacific Crest Trail.
Ngaphandle kwe-Intanethi unolwazi oluyisiseko kwizinto ezimbalwa ezincinci ezaziwayo.
Eminye i-Spellings: Kwiingcebiso zomfundi onokuqonda, ndatshintshile le nqaku ukuba ndisebenzise "thru-hiking," ngokuqinisekileyo iyona ipelisi esetyenziswa ngokuqhelekileyo ... kodwa i-geek yokuhlela kum ifuna ukuba ubuncinane ibonise ukuba " thru "nje akusilo upelo oluchanekileyo lwaloo gama; "ngokusebenzisa". Ngoko ngokuqinisekileyo "ngokunyuka-phaya" kufanele kube ngupelo oluchanekileyo leli gama?
Ndiyanitshela, yinto engumngcipheko oya kundenza ndivuke ententeni yam ukuhamba ubusuku obuthile. Kodwa okwangoku, siyabonga kumfundi we-LS malunga neengcebiso ezilungileyo-kwaye ukuba ungathanda ukungithumela izimvo zakho okanye impendulo kwinqaku, ndilahle umgca!
I-8 e-Best Pocketknives yokuthenga ngo-2018
IsiTaliyane EsiPhezulu EsiPheleleyo IsiXhosa esiThathelekileyo
Iingoma ezili-10 eziphezulu ze-1987